Denzel Nyarumwe - English to Shona translator. Translation services in Automotive / Cars & Trucks
Local time: 00:18 CAT (GMT+2)
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, Transcription, Sales, Copywriting, Transcreation
English to Shona: The Magnificent Macaws
Macaws normally mate for life, and they cooperate in caring for their young. The various species nest in tree hollows, in holes in riverbanks and termite mounds, or in the cavities and crevices of cliffs, where mates can be seen preening each other. Though fully grown at six months of age, the young stay with their parents for about three years. In the wild, macaws live between 30 and 40 years, but in captivity some have lived for more than 60. Translation - Shona
Mavara anoyevedza anoti vai vai pamusoro pemiti yemusango, shiri zvadzinobhururuka dzakawanda dzichienda mudenga! Izvi zvakashamisa vaongorori vainge vasvika kuCentral neSouth America vachibva kuEurope pakapera makore ekuma1400. Vakaona shiri dzinonzi mamacaws. Shiri idzi rudzi rwemaparrots ane mabesu marefu uye dzinogona kuwanika munzvimbo dzinopisa uye dzinonaya mvura yakawanda kuAmerica. Pasina nguva, mifananidzo yezvisikwa izvi zvinoyevedza yainge yava kuonekwa pamamepu enharaunda yacho sechiratidzo cheparadhiso yainge ichangobva kuwanikwa.
Shiri idzi dzakasiyana nedzimwe pakuti dzose hono nehadzi dzine mavara akajeka. Uyewo shiri idzi dzakangwara, dzinogara dzakawanda, uye dzinoita ruzha runovhara nzeve. Mapoka eshiri idzi anomukira kunotsvaga mhodzi, michero yemusango nezvimwewo zvinodyiwa. Boka rimwe nerimwe rinenge riine shiri dzinenge 30. Sezvinongoita mamwe maparrots, shiri idzi dzinowanzoshandisa nzara pakubata chikafu, dzojobora nemuromo wadzo muhombe wakakombama. Dzinotogona kutsemura mateko akaoma enzungu! Kana dzapedza kudya, dzinowanzoenda pane mawere kana kuti pamhenderekedzo perwizi kunodya ivhu, iro rinogona kubatsira kuti dzisakuvara nezvimwe zvinhu zvinenge zviri muchikafu chadzinodya. Uye ivhu iri rinenge riine zvimwe zvinoita kuti dzive neutano.
Hono nehadzi yacho dzinowanzogara dzese kweupenyu hwese, uye dzinobatsirana pakuchengeta vana vadzo. Marudzi akasiyana-siyana eshiri idzi anokandira mazai mumhango (buri rinenge riri pamuti), mumwena inenge iri pamahombekombe erwizi nepachuru, kana kuti mumwena inenge iri pamawere. Ipapo unogona kuona hono nehadzi dzacho dzichibvisana tsvina paminhenga. Vana vacho pavanosvika mwedzi 6, vanenge vanyatsokura, asi vanoramba vachigara nevabereki kwemakore anenge matatu. Kana dziri musango shiri idzi dzinorarama makore 30 kusvika ku40, asi dzimwe dzaichengetwa nevanhu dzakararama makore anopfuura 60.
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Dreamweaver, Powerpoint, Wordbee, Wordfast
Readily Available to give you a perfect job.